SuperTux inouya kuUbuntu Kubata OpenStore, asi kwete kuPINE64 | Linux Vakapindwa muropa
Aya anofanira kunge ari mashoko akanaka, asi hazvizove zvakanyanya nekuti iri kuzopihwa nemumwe munhu mune tariro. Ini handisi kunzwa tariro zvakanyanya nekuti ndiri kurasikirwa nekutenda muUBports uye yayo Ubuntu Kubata, imwe yekutanga Linux mashandiro masisitimu emafoni nemapiritsi, kana imwe yeanonyanya kufarirwa, isingashande mushe zvachose. Uye ndeyekuti a mutambo unozivikanwa kwazvo kuOpenStore, asi Super Tux haishande paPinePhone kana PineTab.
Icho chokwadi ndechekuti, hongu, SuperTux inowanikwa yeUbuntu Kubata zvishandiso, asi mwoyo inoonekwa muOpenStore iri kubva kune vashandisi vari kuitamba pane mamwe madhivhizheni akakosha, chaizvo uye chaizvo iwo asina kugadzirirwa kushandisa Ubuntu Kubata, asi Android. Iyo yekuvandudza inoona kuti inoshanda muOTA-16 yeanoshanda system inomhanya pane Nexus 5, asiwo izvo haishande paPinePhone. Izvo zvakare hazvishande paPineTab, uko server yakaedza MAME kana RetroArch pasina dambudziko, asi paMobian kana Arch Linux.
SuperTux haishande paPinePhone, zvirinani kwenguva pfupi
Izvi zvinogona chete kutiita kuti titarise kukumbira, kana kutove chaiko, pane dzimwe nzira. Uye ndeyekuti Ubuntu Kubata ine yakanaka graphical nharaunda, asi izvozvi haugone kushandisa desktop desktop. Muchokwadi, maapplication mazhinji emuno haashande sezvaitarisirwa pane mamwe majaira, uye chirevo chekuti "ndiani anofukidza zvakawanda, zvishoma kusvina" zvinokwana zvakakwana pano. Seva inotenga piritsi rakauya naro Ubuntu Bata uye haugone kushandisa akawanda emaapps anopfuura mwedzi mitanhatu gare gare. Haisi yakakomba.
Chero zvazvingaitika, ichokwadi kuti Lomiri ichiri yakanakisa graphical nharaunda, uye zvakare kuti Ubuntu Kubata kunoshanda pamidziyo yakawanda. Ichokwadi zvakare kuti watove ne SuperTux iripo, zvichibva pana Super Mario, asi zvese izvi zviri kumashure apo mupepeti seni anofanirwa kuzivisa kuwanikwa, asi haakwanise kupa rumwe ruzivo kunze kwekuti Ubuntu Kugunzva ichiri yakasvibira kwazvo.
Kune vamwe vese vashandisi, avo vanogona kuvhura mutambo, vobva vafara. Handina kukwanisa. Zvakanaka hongu… Pane Arch Linux.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » SuperTux inosvika kuOpenStore yeUbuntu Kubata iyo inotanga kuora moyo
Imwe nzira ndeyekuedza Lomiri (iyo yakajeka nharaunda yeUBports) paruoko rweManjaro.
Kuunza pamwe ruzivo rweLomiri desktop, uye zvirongwa kubva kumanjaro / arch repository
Hongu.Chimwe chinhu chandisati ndadzidza. Ini hapana zvimwe zvandinogona kutaura. Zvakanaka, chingave chinotonhorera ndechekuti mifananidzo yakabuda yatogadzirirwa. Parizvino ndine PineTab zvishoma "kutamba" uye kuyedza zvinhu kunze, asi ini handina kuenda zvakanyanya kumberi.
Zvisinei, kana vagadzirisa iyo Libertine, zvese zvinoshanduka zvishoma.